Manana VPN mifototra amin'ny protocol WebRTC | Avy amin'ny Linux
Manana VPN mifototra amin'ny protocol WebRTC
Darkcrizt | 13/05/2022 00:02 | fampiharana
Andro vitsy lasa izay Nipoitra ny vaovao fa navoaka ny dikan-teny voalohany an'ny Weron VPN, izay tetikasa mikendry ny hamela ny famoronana tambajotra mifanipaka izay mampifandray ireo mpampiantrano miparitaka ara-jeografika ao anaty tambajotra virtoaly, izay mifandray mivantana amin'ny tsirairay ny node (P2P).
Asongadina fa ao anatin'ny toetra fototry ny Weron no misy azy dia azo ampiasaina hamoronana tambajotra tokana itokisana izay mampifandray ireo mpampiantrano eo an-toerana amin'ny rafitra mandeha amin'ny tontolo rahona. Ny fatiantoka ambany amin'ny fampiasana ny WebRTC amin'ny tamba-jotra faran'ny ambany dia ahafahana mamorona tambajotra an-trano azo antoka miorina amin'ny Weron mba hiarovana ny fifamoivoizana eo amin'ny mpampiantrano ao anatin'ny tambajotra eo an-toerana.
Ny lafiny manan-danja iray hafa amin'ity tetikasa ity dia ny hoe misy API omena ho an'ny mpamorona mba hamorona ny rindranasa nozarainy manokana miaraka amin'ny endri-javatra toy ny famerenana ny fifandraisana mandeha ho azy sy ny fametrahana fantsona fifandraisana maro miaraka.
Ankoatra izay dia asongadina ihany koa izany virtoaly IP tambajotra dia tohanana (sosona 3) sy tambajotra Ethernet (sosona 2).
Raha ny ampahany amin'ny fahasamihafana lehibe amin'ny tetikasa hafa mitovy amin'izany toy ny Tailscale, WireGuard ary ZeroTier, dia ny fampiasana ny protocol WebRTC ho an'ny fifandraisana amin'ny nodes amin'ny tambajotra virtoaly.
Ny tombony lehibe heverin'ny tetikasa dia ny fampiasana ny WebRTC ho fitaterana, ny fanoherana amin'ny fanakanana ny fifamoivoizana VPN dia lehibe kokoa, satria io protocol io dia ampiasaina mavitrika amin'ny fandaharana video sy fihaonam-peo malaza toy ny Zoom.
Tsara ny manamarika fa misongadina ihany koa ny WebRTC satria manome fitaovana ivelan'ny boaty hidirana amin'ny mpampiantrano mandeha ao ambadiky ny NAT ary handalo ny firewall orinasa amin'ny alàlan'ny protocols STUN sy TURN. Noho izany, ny tetikasa Weron dia malaza amin'ny fanomezana ny fitaovana rehetra amin'ny famoronana tambajotra overlay mifototra amin'ny WebRTC tsotra, haingana ary azo antoka.
Amin'ireo toetra hafa miavaka amin'ity tetikasa ity dia ireto manaraka ireto no voalaza:
Mamela ny hamorona node fidirana ao ambadiky ny NAT: Satria mampiasa WebRTC ny weron mba hametrahana fifandraisana eo amin'ny nodes, dia afaka mamakivaky mora foana ny firewall orinasa sy ny NAT ianao amin'ny fampiasana STUN, na mampiasa mpizara TURN mihitsy aza mba hanodina ny fifamoivoizana. Mety ho tena ilaina izany, ohatra, amin'ny SSH ao amin'ny laboratoara an-tranonao nefa tsy mandefa seranana amin'ny router-nao.
Manolotra hery hiarovana ny tambajotra an-tranoa: Noho ny tsy fahampian'ny WebRTC amin'ny tamba-jotra ambany dia azo ampiasaina hiarovana ny fifamoivoizana eo anelanelan'ny node amin'ny LAN nefa tsy misy fiatraikany be amin'ny zava-bita.
Mamela anao hiditra amin'ny nodes eo an-toerana amin'ny tambajotra rahona- Raha toa ianao ka mihazakazaka, ohatra, ny kluster Kubernetes miaraka amin'ny nodes mifototra amin'ny rahona nefa te-hitambatra miaraka amin'ny node eo an-toerana, dia azonao atao ny mampiasa weron hamorona tambajotra azo antoka.
misoroka ny sivana- Ny suite WebRTC fototra, izay iorenan'ny fitaovana fihaonambe video malaza toa ny Zoom, Teams, ary Meet, dia sarotra ny manakana eo amin'ny sehatry ny tambajotra, ka mahatonga azy io ho fanampiny fanampiny amin'ny boaty fitaovan-tseraseranao mba hialana amin'ny sivana fanjakana na orinasa.
Manorata ny protocols point-to-point anao manokana: Ny API tsotra dia manamora ny fanoratana fampiharana zaraina miaraka amin'ny fampifandraisana mandeha ho azy, fantsona angon-drakitra maro, sns.
Farany, raha te hahalala bebe kokoa momba ny momba ny tetikasa, tokony ho fantatrao fa ny kaody momba ny tetikasa dia voasoratra ao amin'ny Go ary zaraina amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana AGPLv3. Ny fanamboarana vonona dia voaomana ho an'ny Linux, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, Solaris, macOS ary Windows.
Ahoana ny fametrahana Weron amin'ny Linux?
Ho an'ireo izay liana amin'ny fametrahana Weron amin'ny rafitra misy azy dia afaka manao izany amin'ny fomba tena tsotra izy ireo ary azo atao amin'ny saika fizarana Linux amin'izao fotoana izao.
Mba hahafahana manatanteraka ny fametrahana dia sokafy tsotra izao ny terminal ary ao anatin'izany no hanoratantsika ireto baiko manaraka ireto:
curl -L -o /tmp/weron "https://github.com/pojntfx/weron/releases/latest/download/weron.linux-$(uname -m)" sudo install /tmp/weron /usr/local/ bin sudo setcap cap_net_admin+ep /usr/local/bin/weron
Raha te hianatra bebe kokoa momba ny fampiasana ny Weron ianao dia afaka manontany ity rohy manaraka ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Manana VPN mifototra amin'ny protocol WebRTC
juanfran dia hoy izy:
Webrtc dia leak, voasivana ny ip-nao ary maro hafa, ny tsara indrindra dia vpn tsara karama, izay manakana ny webrtc marina ary miorina amin'ny wireguard, izay protocol tsara indrindra ankehitriny.
Mamaly an'i juanfran
Firefox sy LibreOffice: Ahoana ny fampiasana ny dikan-teny vaovao amin'ny AppImage
Tonga miaraka amin'ny fanohanana ny macOS, Linux sy ny maro hafa ny Flutter 3